Accountant | CKY Electric Co., Ltd. ﻿
Company: CKY Electric Co., Ltd.
•	Any Graduate and related Diploma or LCCI Level I or II
•	Must have good skills in using Microsoft office applications (Word and Excel).
•	Must have experience in related field more preferred.
Work location 60/A, Yin Mar Myaing St., Thuwana/23 (Su Paung) Ward,Thingangyun, Yangon.
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • မော်လမြိုင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • တောင်ကြီး၊ လားရှိုးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
•	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	အိမ်တွင်းမီးအလှဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။
Accountant Accountancy/Finance Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon CKY Electric Co., Ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon